Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny Alaska Airlines dia miantso ny anarana hoe Chief Operating Officer vaovao
Ny Alaska Airlines dia nanendry an'i Chief Constance von Muehlen ho tompon'andraikitra ambony amin'ny asa
Constance von Muehlen dia veteranan'ny fiaramanidina 30 taona miaraka amin'ny fiarovana lalina, fanarahana ary traikefa amin'ny asa
COO ankehitriny, Gary Beck, dia nanambara ny fisotroan-dronono taorian'ny asany nahagaga nandritra ny 47 taona tamin'ny fiaramanidina
von Muehlen dia mitondra rakitsoratry ny fiarovana sy ny fahombiazan'ny asa amin'ny andraikitra
Talohan'ny nidirany tao amin'ny Alaska Airlines tamin'ny taona 2011 ho talen'ny Maintenance Engine, dia nandany 20 taona i von Muehlen tamin'ny fikojakojana ny fiaramanidina
Alaska Air Group dia nanambara ny fanendrena an'i Constance von Muehlen ho Chief Operating Officer an'ny Alaska Airlines, nanomboka ny 3 aprily 2021. Rehefa nandray an'io andraikitra io i von Muehlen dia hanatevin-daharana ny Komity Mpanatanteraka ao Alaska ary hanao tatitra amin'i Ben Minicucci, izay lasa Lehiben'ny mpanatanteraka amin'ny 31 martsa , 2021. Nandimby ny COO ankehitriny izy, Gary Beck, izay nanambara ny fisotroan-dronono taorian'ny asa nahavariana 47-taona tamin'ny fiaramanidina.
Veteranin'ny fiaramanidina 30 taona izay nahazo fiofanana ho an'ny mpitarika ny helikoptera Black Hawk nanidina ho kapitenin'ny tafika amerikana, von Muehlen dia nitondra rakitsoratry ny fiarovana sy ny fahombiazan'ny asa. Amin'ny maha COO azy, von Muehlen dia hanara-maso ny asa isan'andro amin'ny tany sy amin'ny rivotra Alaska Airlines, mifantoka amin'ny fanatontosana ny fanoloran-tenan'i Alaska amin'ny serivisy tena izy sy mikarakara izay manome antoka ny traikefa azo antoka, azo itokisana, tsy misy olana ary fandraisana olona rehetra. Izy koa dia ho talen'ny birao an'ny McGee Air Services, izay hanara-maso ny asa ao amin'ny sampana serivisy any Alaska.
“Constance dia mpitondra mahatoky lalina izay mamoaka ny tsara indrindra amin'ny olona. Izy no mamoha ny fahafahan'ny isam-batan'olona hitondra ny ekipa mifantoka amin'ny vahaolana, ”hoy i Minicucci. “Constance dia manana fahaiza-manao mahavariana amin'ny fitantanana ny fahasarotana, manamora ny rafitra ary mijery ny zorony rehetra hamaly ny fitakiana amin'ny ho avy amin'ny orinasantsika. Rehefa miarahaba ny vahiny miverina eny amin'ny habakabaka taorian'ny krizy COVID-19 isika dia tsy afaka mieritreritra olona tsara kokoa hanara-maso ny fahasitranantsika. ”
Vao tsy ela akory izay dia i von Muehlen dia filoha lefitra ambony amin'ny fikojakojana sy ny injeniera izay nitarihany ny fiarovana rehetra, ny fanarahan-dalàna ary ny fahombiazan'ny fiaramanidina Boeing sy ny zotram-piaramanidina Airbus. Talohan'izay, von Muehlen dia talen'ny tompon'andraikitra tao amin'ny Horizon Air, izay niandraiketany ny ekipan'ny mpanjifa, inflight, pilote, fikolokoloana ary ekipa fanaraha-maso ny rafitra.
Talohan'ny nidirany tao amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka tamin'ny taona 2011 tamin'ny naha-talen'ny Maintenance Engine azy dia nandany 20 taona tamin'ny fikojakojana ny fiaramanidina i von Muehlen, anisan'izany ny asany amin'ny maha-tale jeneralin'ny foibe serivisy an'i Pratt sy Whitney Canada any Saint-Hubert, Quebec, ary talen'ny fikojakojana ny airframe ao amin'ny Air Canada . Manana mari-pahaizana licence avy amin'ny University Johns Hopkins sy mari-pahaizana momba ny Training Leadership Training avy amin'ny Darden School ao amin'ny University of Virginia. Izy koa dia nahavita MBA mpanatanteraka tao amin'ny Foster School of Business ao amin'ny University of Washington.
Rehefa mandray an'io andraikitra io i von Muehlen dia hanao ny tantaran'ny Alaska Airlines amin'ny alàlan'ny fahatongavany ho COO vehivavy voalohany an'ny orinasa.